Maika avy amin'ny Superstar "Vanilla Ice" sy Samsung: Ice, Baby! Ahoana no hanavotana an'izao tontolo izao?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Maika avy amin'ny Superstar "Vanilla Ice" sy Samsung: Ice, Baby! Ahoana no hanavotana an'izao tontolo izao?
Vaovao Mafana • Entertainment • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Etazonia Vaovao Vaovao
Vanilla Ice mpiara-miasa amin'ny Samsung Electronics hamoaka indray ny 'Ice, Ice Baby' tokananina antsoina hoe 'Ahenao ny ranomandry anao, Ice Baby'
Ny superstar rap amerikana Vanilla Ice tamin'ny taona 90 dia niara-niasa tamin'ny Samsung Electronics hamoaka indray ilay hira malaza 'Ice, Ice Baby' ho 'Reduce Your Ice, Ice Baby', izay mitondra hafatra mafonja “miaraka amin'ny sisiny maharitra”.
Ilay horonantsary mozika vaovao dia namporisika ny mpankafy hanao fanovana kely miaraka amin'ny fahasamihafana lehibe, miantso an'izao tontolo izao hampiakatra ny hafanan'ny freezer-dry zareo, ary hampihena ny dian-tongotry ny karbaona tsirairay avy mba hisy fiantraikany manerantany sy iraisana.
Ny angon-drakitra vaovao navoakan'ny Samsung dia mampiseho fa raha ny isan-tokantrano any Eropa dia nampiakatra ny mari-pana ho an'ny vata fampangatsiahana hatramin'ny 1 degre Celsius1, dia azo hamonjy 1 tapitrisa taonina isan-taonina ny famoahana CO2 isan-taona.
Ity dia ny emissions CO2 mitovy mivoaka amin'ny fiara mpandeha mihoatra ny 217,000 izay entina mandritra ny herintaona, maherin'ny 2.5 miliara kilometatra voahodin'ny fiaran'ny mpandeha antonony na ny fampiasana angovo mandritra ny herintaona amin'ny trano maherin'ny 120,000 mitambatra 3.
Samsung dia mankalaza ny fandefasana ny laharam-pahamehana vaovao ao amin'ny Bespoke Refrigerator rehefa manasongadina ny fihodinana ao amin'ilay horonantsary mozika vao navoaka. Ny elanelana dia tonga amin'ny safidin'ny làlana 14 mahazatra any UK, manomboka amin'ny pastel mamiratra ka hatramin'ny monochromes marevaka, ary karazana famaranana toa ny Glam, Satin, Stainless Steel ary Cotta.
Hoy i Vanilla Ice: “Tiako ny miaina fomba fiaina maharitra ary anisan'izany ny tsy fahombiazan'ny angovo. Izahay dia mijery hatrany ireo volavola faran'izay tsara indrindra ho an'ny tranoko manokana, ary tena tiako ny fomba azo anaovana ny filaharana Bespoke. Faly be aho hiara-hiasa amin'ny Samsung amin'ity tetikasa ity satria ny mozika dia fomba iray lehibe hampifandraisana ny olona ary hanaparitahana ity tantaran'ny tontolo iainana ity. Manantena aho fa horaisina amin'ny feo avo sy mazava ny hafatra, ary afaka manao izay vitantsika isika rehetra hikarakarana ny planeta misy antsika. ”
Tim Beere, Senior Category Lead Cooling ao amin'ny Samsung Europe dia nilaza hoe: “Faly izahay fa niara-niasa tamin'i Vanilla Ice tamin'ity tetikasa ity hanaparitaka hafatra maharitra izay tena zava-dehibe aminay. Ny vata fampangatsiahana Bespoke isan-karazany dia natao haharitra sy azo antoka ao an-tsaina, manome fitaovana afaka maharitra mihoatra ny lamaody, miaraka amin'ireo tompona mandritra ny taona maro amin'ny filàn'izy ireo miovaova hatrany, ny tsiro, ny fanjifana sakafo ary ny singa mampivelatra ny fiainam-pianakaviana. Ireto mpiasan'ny tanana mahay ireto dia namboarina manokana, malefaka amin'ny asany, ary mateza be koa. ”
Ny faritra vaovao an'ny Bespoke Refrigerator an'ny Samsung dia namboarina mba hanampiana hampihena ny fiantraikan'ny tontolo iainana miaraka amin'ireo takelaka azo soloina sy ny endriny modular mamela ny mpampiasa hanavao, fa tsy hisolo ny vata fampangatsiahana intsony rehefa mandeha ny fotoana. Tsidiho ny samsung.com/vanilla-ice raha mila bebe kokoa i